अन्य रोचक जानकारीको लागि तल हेर्नुहोस ।
यात्रु भरिएको रेलमा अश्लील फिल्मको आवाज गुन्जिएपछि !
लन्डनमा एउटा विचित्रको घटना भएको छ यात्रुहरु सवार रेल गुडिरहेको थियो । एकाएक रेलको ‘साउन्ड सिस्टममा’ अश्लील फिल्मको आवाज गुन्जियो ।
‘साउथ वेस्टन रेलवे’ का एक कर्मचारीले माइक्रोफोन खुल्लै छाडेर अश्लील फिल्म हेर्दा त्यसको आवाज यात्रुसम्म प्रसारित भएको जनाइएको छ । त्यो क्लिप सामाजिक सन्जालमा भाइरल बनेको छ । एजेन्सी/ नयाँ पत्रिका
साइकल चलाउँदा पुरुषको यौन स्वास्थ वा मूत्र प्रणालीको सञ्चालनमा कुनै नकारात्मक प्रभाव नपर्ने
हालै गरिएको स्वास्थसम्बन्धी एक अनुसन्धानले साइकल चलाउँदा पुरुषको यौन स्वास्थ वा मूत्र प्रणालीको सञ्चालनमा कुनै नकारात्मक प्रभाव नपर्ने तथ्य पत्ता लगाएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरुले साइकल चालउनेहरुलाई धावक र पौडीवाजहरुसँग तुलना गर्दा तिनीहरुमा तुलनात्मक रूपमा कुनै पनि कमी नभेटेको बुझिएको छ।
छोरा जन्माएको २६ दिनपछि फेरि सुत्केरी, दोस्रो पटकमा फेरि पाईन् दुईवटा बच्चा !
बंगलादेशमा एक महिलाले छोरा जन्माएको २६ दिनपछि फेरि दुईवटा बच्चालाई जन्म दिएकी छन् । चिकित्साजगतमा यसलाई चमत्कार मानिएको छ ।
२० वर्षीय महिलाले हालै छोरालाई जन्म दिएकी थिइन् । सुत्केरी भएको २६ दिनपछि उनले थप दुई बच्चा जन्माएकी हुन् । उनले पछिल्लो पटक जुम्ल्याहा बच्चालाई जन्म दिएको बताइएको छ ।आरिफ सुल्ताना नाम गरेकी ती महिला श्यामलागाछी गाउँ निवासी रहेको बताइएको छ ।
उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक शीला पोद्दाका अनुसार पहिलोपटक सुत्केरी हुँदा ती महिलाको गर्भमा अन्य बच्चा रहेकोबारे थाहा नै थिएन । सुत्केरी भएको २६ औं दिनमा स्वास्थ्यमा समस्या भएर उनी अस्पताल आएको र स्वास्थ्य परीक्षणपछि उनको गर्भमा शिशु रहेको थाहा भएको डा. शीलाले बताइन् ।